किन हुँदैछ अक्षय कुमारको नागरिकता र राष्ट्रिय पुरस्कारलाई लिएर विवाद ? - Jhapa Online
किन हुँदैछ अक्षय कुमारको नागरिकता र राष्ट्रिय पुरस्कारलाई लिएर विवाद ?
सामाजिक सञ्जालमा केही व्यक्तिहरु अक्षय कुमारविरुद्ध आफ्ना विचारहरु राखिरहका बेला फिल्म ‘रईस’ का निर्देशक राहुल ढोलकिया र अभिनेता परेश रावल भने अक्षय कुमारको समर्थनमा बोलेका छन् । निर्देशक राहुल ढोलकिया नेशनल फिल्म अवार्ड्सको निर्णायक मण्डलका सदस्य पनि हुन् । उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन् ‘नेशनल अवार्ड्सको मुद्दामा यस्तो प्रावधान रहेको छ, विदेशी मूलका व्यक्तिलाई समेत यो पुरस्कार दिन मिल्छ । यो वैध हो र नियम अनुसार नै रहेको छ । किनकी म आफैँ पनि नेशनल फिल्म अवार्ड्सको निर्णायक मण्डलको सदस्य पनि भइसकेको छु ।’ एजेन्सी